विचार तपाईंको आफ्नै प्राप्त छ निष्क्रिय आय को स्रोत, यो धेरै मान्छे bothers। को व्याख्या धेरै सरल छ - सबैलाई कुनै पनि काम bothering छैन, कमाउन सक्षम हुन चाहन्छु। काम बिना पैसा प्राप्त गर्न - यो निष्क्रिय आय को विचार छ।
विशेष गरी यस्तो अवधि समयमा exacerbated एक व्यक्ति आफ्नो मुख्य काम मा कठिनाइ सामना र बुझ्छ उहाँले सबै आफ्नो जीवन जमानत को दिनचर्या स्थानांतरण मा लगे चाहनुहुन्छ गर्दैन गर्दा "पैसा को शक्ति" को लागि खोज सुरु गर्न, र आफैलाई, आफ्नो परिवार, विश्राम र आत्म विकास गर्न थप समय समर्पित गर्न चाहनुहुन्छ इच्छा।
यस लेखमा हामी निष्क्रिय आय को सबै भन्दा किफायती व्यापार विचार वर्णन गर्न प्रयास गर्नेछ। सायद यो पढ्न गर्नेहरूले प्रेरित हुन र आफ्नो यस्तो स्रोत फेला!
सबैभन्दा लोकप्रिय र सजिलो को एक, सायद, सम्पत्ति को पट्टा देखि आय छ। तपाईँको सम्पत्तिको छ वस्तु लागि भाडादारों फेला पार्न पर्याप्त - यस्तो विचार यस्तो आय को सङ्गठनलाई स्रोतहरू मामलामा प्राथमिक छ। अर्कोतर्फ, यो कठिनाई, पहिलो, तपाईं दान गर्न चाहनुहुन्छ के को स्वामित्व प्राप्त गर्न छ; र दोश्रो - लाभकारी हासिल गर्न। विस्तृत व्याख्या गर्नुहोस्।
शहर को केन्द्र मा भाडामा अपार्टमेन्ट - निष्क्रिय आय को उत्कृष्ट विचार। कठिनाइ त्यहाँ के हुन सक्छ? पहिले, यस्तो वस्तु विशेषता सबैले छ। यो - मुख्य समस्या। दोस्रो, तपाईं यस्तो एक घर छ भने, यो आवश्यक एक भाडादार फेला पार्न छ। तेस्रो, यो व्यक्ति एक भाडा दर, उहाँले उठयो गर्न सक्षम हुनेछ, र साथै, तपाईं को लागि लाभदायक हुनेछ भन्ने प्रस्ताव गर्नुपर्छ। यो पनि भाडादारों को कांग्रेस पछि घर सफाई को लागत, साथै मूल्यह्रास र परिशोधन खर्च समावेश गर्नुपर्छ।
यस्तो गतिविधिमा संलग्न मानिसहरूको ठूलो संख्या आज यो कारणले हो - घर को उदाहरण मा, सबै कुरा एकदम सरल देखिन्छ। तर लिन, उदाहरणका लागि, थप जटिल वस्तु छ - कुनै पनि गैर-आवासीय परिसर, शहर को सरहद मा स्थित। तपाईं मालिक, यो यस विषयमा चासो छ जो कसैले फेला पार्न कठिन हुनेछ।
तर, एक निष्क्रिय आय प्राप्त गर्न, तपाईं sublease मा केहि को वितरण मा संलग्न हुन सक्नुहुन्छ। यो, उदाहरणका लागि, तपाईँले प्रति महिना एक घर भाडामा, र भाडामा बाहिर - दैनिक। परिणामस्वरूप लाभ - किराया र मालिक फर्के पैसा भिन्नता।
राम्रो निष्क्रिय आय सुरक्षित एक अद्वितीय वस्तु सिर्जना, हिज्जे सक्छ प्रतिलिपि अधिकार द्वारा। उदाहरणका लागि, यो एक सांगीतिक संरचना, एक कम्प्यूटर कार्यक्रम, चलचित्र वा तस्वीर हुन सक्छ। संगीत अधिकार को सुरक्षा संग, को पाठ्यक्रम, हाम्रो देशमा सबै धेरै खराब छ - धारकों संगीत नभएसम्म कमाउन सक्छ। तिनीहरूले च्यानलहरू खरीद छन् के सिनेमा Contributory सिनेमाहरू स्वार्थपूर्ति र। तर कार्यक्रम वा तस्वीर संग छरितो छ। पहिलो मामला मा, तपाईं, भन्नु, सीधै इन्टरनेटमा यसको विकास प्रतिहरू बिक्री प्रत्येक स्थापनाको लागि पैसा प्राप्त सुरु गर्न सक्षम हुनेछ। दोस्रो, छवि फोटो साझेदारी साइट मा राख्दै पनि साँचो निष्क्रिय आय उत्पन्न हुनेछ।
विचार यी साइटहरूमा मा रोक छैन - तपाईं कुनै पनि सोच्न सक्नुहुन्छ उपयोगी आविष्कार, यसलाई प्याटेन्ट र यसको प्रयोगको लागि रोयल्टी भुक्तानी मा बाँचिरहेका छौं।
निस्सन्देह, निष्क्रिय आय को संगठन को अर्को एकदम साधारण तरिका, आफ्नो व्यवसाय छ। एक दोकान, क्याफे, केही सेवाहरू, सेवा प्रदान, र यति मा - यो केहि हुन सक्छ। कि निष्क्रिय आय को एक यस्तो विचार, स्पष्ट लाभ: एक काम व्यापार सिर्जना गर्ने, र ठीक चयन कर्मचारी, राखने, तपाईं अलिकति सार्न नियन्त्रण टाढा यो भन्दा बढी र अन्य परियोजनाहरूको समानान्तर विकास लिन सक्नेछन्। तसर्थ, हामी आफ्नो आय को आकार र वृद्धि वृद्धि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ।
आफ्नो व्यापार को बेफाइदा जोखिम उच्च स्तर र द्वारा सुरु-अप कारोबार सामना गर्नुपर्ने कठिनाइहरू धेरै छ। तपाईं पनि सुरु-अप राजधानी, जो आधारमा भिन्न बारेमा भूल सक्दैन व्यापार को प्रकार, जसलाई तपाईं के गर्न चाहन्छु। तर, यो अर्को लेख को लागि एक विषय छ।
इन्टरनेटको विकास व्यापार अर्को प्रमुख र वैश्विक स्कोप गर्न नेतृत्व गरेको छ। अब सबैले अनलाइन आफ्नो आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यो एक व्यापार जस्तै बनाउन लागत वास्तविक सम्झौता मा लगानी भन्दा धेरै कम हुन सक्छ कि विचारणीय छ। प्रतियोगिता वास्तविक जीवनमा भन्दा कुनै कम छ - तर यो इन्टरनेटमा काम सजिलो छ भन्ने आशा गर्न आवश्यक छ। तर, एक पटक एक सफल परियोजना चलिरहेको, यो सम्भव एक प्रत्याभूति निष्क्रिय आय प्राप्त छ।
यसलाई (त्यसैले समाचार ब्लग, सेवा सूची, स्टोर, र) स्रोत लागि हुन सक्छ भन्ने विचार प्रतिबन्धित छैन।
निष्क्रिय आय को अर्को स्पष्ट विचार - यो लगानी छ। उच्च जोखिम र लगानी गर्न पैसा आवश्यकता - यहाँ केही कमियां छन्। जोखिम को डिग्री आकलन मा निवेशक उहाँले लगानीको बनाउन चाहनुहुन्छ जहाँ बारेमा निर्णय लिन्छ र त्यसपछि लाभांश प्राप्त गर्न थाल्छ। पछिल्लो निष्क्रिय आय को विचार को सम्पूर्ण अर्थ छ।
एउटा सानो सहरमा निष्क्रिय आय को विचार शहर जस्तै साथै सान्दर्भिक पनि छ। ठीक एक लाभ बनाउन वा पैसा गुमाउने को सम्भावना आकलन गर्न - निष्क्रिय आय को एक उपकरण रूपमा लगानी मुख्य कुरा यहाँ, सधैं र सबैतिर नै मिलाउँछ। यो लगानीको स्कोप मा निर्भर गर्दछ।
निस्सन्देह, निष्क्रिय आय को सबै भन्दा राम्रो विचार सधैं मान्छे निरपेक्ष बहुमत अज्ञात बाँकी छन्। र ती मात्र तिनीहरू देखा, र तिनीहरूलाई लागू गर्ने, तिनीहरूलाई लागू गर्न थाल्छन्। एक हात मा, जस्तै आय प्राप्त गर्न के थाहा नगर्ने ती लागि खराब। अर्कोतर्फ, सबैलाई निष्क्रिय आय को स्रोत चलाउन मौका छ।
तपाईं पैसा छ भने - यो कुनै पनि वस्तु वा लगानी एक पट्टा हुन सक्छ। कुनै पैसा छ भने, तपाईंले एक सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ "स्क्राच देखि" व्यापार, एक रोचक विचार आधारित वा आफ्नो इन्टरनेट परियोजना सुरु गर्नुहोस्। यस मामला मा, तपाईं सफलता पक्कै पनि नेतृत्व गर्नेछन् जो एक दीर्घकालीन कठिन काम, पाउनुहुनेछ।
निष्क्रिय आय को एक राम्रो विचार - काम गर्दछ कि एक! तपाईंको प्रयासहरूलाई राम्रो भाग्य!
व्यापार योजना इन्टरनेट क्याफे।
बाट अग्रणी विशेषज्ञ बिक्री प्रशिक्षण, बिक्री प्रशिक्षण
सङ्कुचन शर्ट: प्रकार र एक चयन सुविधाहरु
Rufus कार्यक्रम: एक बुटेबल USB ड्राइभ सिर्जना गर्न निर्देश
साना लागि खेलौना के razvivalka गर्नुपर्छ? युवा आमाबाबुको लागि सुझावहरू
के "के मई आ" गर्दैन। वाक्यांश को मूल
Myositis: उपचार, लक्षण
"Flix" (स्प्रे): निर्देशन, analogs, समीक्षा
बगैचा लिली आफ्नो साइट सजाउनु
आकर्षण हांग्जो, चीन: चित्र, संग्रहालय, प्रकृति
उद्यमी मा मानव संसाधन योजना।